२०२० को इदमा सलमान र अक्षयको बक्सअफिस भिडन्त ! « रंग खबर
२०२० को इदमा सलमान र अक्षयको बक्सअफिस भिडन्त !
रंगखबर, काठमाडौँ – ‘पद्मावत’ निर्देशक संजयलीला भन्सालीको आगामी प्रोजेक्ट ‘इन्शाअल्लाह’ अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ । कारण, २० वर्ष पश्चात संजयलीला र सलमान खानको सहकार्य नै हो ।
फिल्ममा सलमानको अपोजिट आलिया भट्ट जोडिएपछि यो प्रोजेक्टको चर्चा अझ चुलियो । २७ वर्ष उमेर अन्तरका सलमान र आलियाको जोडी कस्तो देखिएला ? भन्ने उत्सुकतामै ‘इन्शाअल्लाह’ टिमबाट नयाँ खबर बाहिरिएको छ । जो सहि सावित भएमा बलिउडमा कम्पननै आउने छ ।
बलिउड हंगामासँगको एक अन्तर्वार्तामा ‘इन्शाअल्लाह’लाई २०२० को इदमा रिलिज गर्ने सलमानले खुलासा गरेका छन् । ‘म पहिले दबंग ३को छायाँकन सुरु गर्दैछु । त्यसपश्चात इन्शाअल्लाह गर्नेछु । दबंग ३ यहि वर्षको डिसेम्बरमा रिलिज हुनेछ । भने, इन्शाअल्लाह २०२० को इदमा ।’ उनले भनेका छन् ।
२०२० को इदमा अक्षय कुमारको ‘सूर्यवंशी’ले रिलिज तय गरिसकेको छ । यो प्रतिक्षित फिल्मलाई रोहित सेट्टीले निर्देशन गर्दैछन् । यो मितिमा यदि ‘इन्शाअल्लाह’ रिलिज भयो भने ५ वर्ष पश्चात पुन: संजयलीला र रोहितको बक्सअफिस भिडन्त हुनेछ ।
सन् २०१५ मा संजयको ‘बाजिराव मस्तानी’ र रोहितको ‘दिलवाले’ एकआपसमा भिडेका थिए । जहाँ संजयले बाजी मारेका थिए ।
रंगखबर, काठमाडौँ – सन् २०१२ मा रिलिज भएको व्यंग्यात्मक कमेडी ड्रामा ‘ओ माई गड’को ९ वर्षपछि
रंगखबर, काठमाडौँ – अश्लिल फिल्म बनाउने र बेच्ने गरेको आरोपमा अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीका पति राज
तीन राष्ट्रिय अवार्ड विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिकरीको निधन
रंगखबर, काठमाडौँ – बलिउड तथा टेलिभिजन अभिनेत्री सुरेखा सिकरीको निधन भएको छ । शुक्रबार हृदयघातका
सिद्धार्थको ‘शेरशाह’ ओटीटी मै रिलिज हुँदै
रंगखबर, काठमाडौँ – सिद्धार्थ मलहोत्रा र कियरा आडवाणी अभिनित फिल्म ‘शेरशाह’को रिलिज डेट फाइनल गरिएको
कस्तो छ धुर्मुस-सुन्तलीको ‘म त मर्छु कि क्या हो’को ट्रेलर ?
सरकारले १० फिल्ममा सह-लगानी गर्ने, स्टोरी बैंकमा कथा पेस गर्न आव्हान